Manchester City oo ku guuleysatay koobka Carabao Cup kaddib markii ay garaacday Tottenham Hotspur… +SAWIRRO – Gool FM
Manchester City oo ku guuleysatay koobka Carabao Cup kaddib markii ay garaacday Tottenham Hotspur… +SAWIRRO
(London) 25 Abriil 2021 Waxaa goor dhow soo idlaatay ciyaartii kama dambeysta aheyd ee Final-ka Carabao Cup ee dalka England taasoo u dhexeysay kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur.
Manchester City ayaa ku guuleysatay koobka Carabao Cup kaddib markii ay ku garaacday kooxda Tottenham Hotspur 1-0, ciyaar aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Wembley.
Qeybta hore ee kulanka Final-ka Carabao Cup ayeey ku kala nasteen labada kooxood Manchester City iyo Tottenham Hotspur bar-bardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 82-aad kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 1-0 ka dhigay Aymeric Laporte oo kubad gees ka laad ah uu soo tuuray Kevin De Bruyne madax kaga faa’ideystay.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-0 ay kaga adkaatay Manchester City kooxda Tottenham Hotspur kulankii Final-ka ahaa ee Carabao Cup-ka, sky blue ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay koobka tartankan.
Loollanka La Liga, kulammada u harsan Atletico Madrid, Real Madrid iyo Barcelona, kooxda heysata fursadda ugu wanaagsan & wax walba oo aad uga baahan tahay dhammaadka horyaalka Spain